Ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri kacha ukwuu n'ụwa na-agbasa mmetọ ikuku ruo oke | Ụgbọ mmiri
Location: Mbido » Ịdee » Isesgbọ mmiri » 'Slọ ọrụ ụgbọ mmiri kachasị ukwuu n'ụwa na-ebute mmetọ ikuku na oke
'Slọ ọrụ ụgbọ mmiri kachasị ukwuu n'ụwa na-ebute mmetọ ikuku na oke
Onye na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri kacha ibu n'ụwa, Carnival Corporation, wepụtara mmetọ ọzọ n'ụdị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10 ugboro karịa sọlfọ oxide (SOX) gburugburu ụsọ osimiri Europe karịa ihe niile 260 nde ụgbọala ndị Europe na 2017. Nke a dị ka nyocha ọhụrụ site na otu ndị njem na-adigide, &Gbọ njem na gburugburu ebe obibi.
Nkwupụta ahụ na-ekwu na Royal Caribbean Cruises, ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri nke abụọ kachasị ukwuu n'ụwa na-ewepụta okpukpu anọ karịa otu ụgbọ ala ụgbọ ala Europe eji na ntanye.
Ihe ọkụkụ SOX na-emepụta sulphate (SO4) aerosol nke na-eme ka ahụike mmadụ dịkwuo njọ ma na-atụnye ụtụ na acidification na gburugburu ụwa na mmiri.
N'okwu zuru oke, Spain, andtali na Gris, nke France na Norway na-esochi, bụ mba Europe ndị kachasị kpughere ikuku SOX site na ụgbọ mmiri mgbe Barcelona, ​​Palma de Mallorca na Venice bụ obodo ndị kachasị emetụta na ọdụ ụgbọ mmiri Europe, nke Civitavecchia ( Rome) na Southampton.
E kpughere mba ndị a n'ihi na ha bụ isi ebe njem nleta, kamakwa n'ihi na ha nwere ụkpụrụ mmanụ sọlfọ nke na-enye ohere ka ụgbọ mmiri gbaa mmanụ ndị kacha sọọkarị mmanụ n'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri ha niile.
Faig Abbasov, onye njikwa iwu na T&E, kwuru, sị: “xgbọ mmiri ụgbọ mmiri okomoko bụ obodo ndị na-ese n’elu mmiri nke ụfọdụ mmanụ kacha dị uju. Obodo dị iche iche na-amachibido ụgbọ ala diesel ruru unyi mana ha na-enyefe ụlọ ọrụ na-ebugharị n'efu na-agbapụta anwụrụ ọkụ nke na-emerụ emerụ ahụ ma ndị nọ n'ụgbọ ma n'ikperé mmiri dị nso. Nke a bụ adịghị anakwere.
NOX si na ụgbọ mmiri na Europe na-emetụtakwa ụfọdụ obodo, ihe ruru 15% nke nitrogen oxides (NOX) nke ndị njem ụgbọ ala Europe wepụtara na otu afọ, akụkọ ahụ chọtara. Dịka ọmụmaatụ, na Marseille, dịka ọmụmaatụ, ụgbọ mmiri 57 butere na 2017 ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ NOX dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ụgbọ ala ndị njem 340,000 nke obodo ahụ. N'akụkụ osimiri nke mba ndị dị ka Norway, Denmark, Gris, Croatia na Malta, ọtụtụ ụgbọ mmiri na-ahụ maka ihe karịrị NOX karịa ọtụtụ n'ime ụgbọ ala ụgbọ ala ha.
Europe ga-emejuputa ọkọlọtọ ọdụ ụgbọ mmiri efu ozugbo enwere ike, enwere ike ịgbatị ya n'ụdị ụgbọ mmiri ndị ọzọ. Nkwupụta ahụ na-atụ aro ịgbatị mpaghara nchịkwa emission (ECAs), nke dị ugbu a naanị na North na Baltic Seas na Channel Channel, na ndị ọzọ nke Europe. Ọzọkwa, akụkọ ahụ na-atụ aro ka ị na-achịkwa nsị NOX site na ụgbọ mmiri dị ugbu a, bụ ndị a na-ahapụ ugbu a na ụkpụrụ NOx na-etinye n'ọrụ na nchịkwa nchịkwa.
Faig Abbasov kwubiri, sị: “E nwere teknụzụ ndị tozuru etozu iji hichaa ụgbọ mmiri. Egwuregwu eletrik nwere ike inyere aka belata ihe ọkụkụ dị n'ọdụ ụgbọ mmiri, batrị bụ ihe ngwọta maka ogologo dị mkpụmkpụ na teknụzụ hydrogen nwere ike ịnweta ọbụna nnukwu ụgbọ mmiri. O doro anya na ngalaba ụgbọ mmiri ahụ achọghị iji aka ha gbanwee ọrụ ha, yabụ anyị kwesịrị gọọmentị itinye aka ma nye iwu ka etu esi ewepụta ikuku. ”
Caribbean Ntu Croatia Europe France Italy Mallorca Malta Transport Venice
Njem Nleta Ọchịchịrị: South Korea na-eji mgbuchapụ iji rata ndị njem nleta
Royal Caribbean: Mgbanwe amụma njem Cuba 'na-emetụta ndị ọbịa anyị, arụmọrụ yana ego'
Starbucks na-ahapụ Russia maka ihe ọma
Mmetụta na-adịgide adịgide nke ogologo COVID